Cabdi Xaashi oo markale dib loogu doortay guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCabdi Xaashi oo markale dib loogu doortay guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya
April 26, 2022 Puntland Mirror Somalia 0
Cabdi Xaashi. [sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa maanta oo Talaado ah markale dib loogu doortay guddoomiyaha aqalka sare Soomaaliya oo uu hoggaaminayay afartii sanno ee la soo dhaafay.
Xaashi ayaa helay 28 cod halka la tartamihii u dhawaa Saalax Jaamac uu helay 24 cod, sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha kumeelgaarka ah Maxamed Cali Yuusf Gaagaab.
Garoowe-(Puntland Mirror) Dagaalyahano ISIS katirsan ayaa weeraray tuulada Dasaan ee gobolka Bari, sida sarkaal dowladda ah uu warsidaha Puntland Mirror u xaqiijiyay. Sarkaal dowladda Puntland katirsan oo codsaday in aan magaciisa la sheegin, ayaa Puntland Mirror [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada xooga dalka Soomaaliya ayaa maanta oo ay bishu ku beegantahay 12-ka April u dabaaldegay sanadguuradii 57-aad ee asaaskooda. Munaasabadaha dabaaldega ee ciidamada ayaa ka dhacay intooda badan gobolada dalka. Madaxweynaha dowladda federaalka [...]